Anuz Kulung's Blog: साच्चिकै Easy1UP अनलाइन बिजनेशले पैसा दिन्छ त ?
पछिल्लो समयमा ब्लगमा म फेरी तपाईहरुको निम्ति आउन थालेको छु । दिनमा कम्तिमा एउटा ब्लग चाहि लेखौ भन्ने नै हो । ब्लग लेखन कमाइखान को लागि भन्दा पनि तपाईहरुलाई जानकारीको लागि जक्सन पोइन्ट होस् भनेर हो ।
अघिल्लो दिन मैले एफिलेट मार्केटिंको बारेमा अपडेट गरेको थिए । त्यसमा मैले केहि एफिलेट मार्केटिं कम्पनीको नामहरु (Empower Network, National Wealth Center, Aispire, Mobe, Digital Altitude, Ultimate Cycler, Infinity Downline) पनि उल्लेख गरेको थिए । जसमा विश्वमा चलेको कम्पनीहरु नै हुन् । तपाईले ति कम्पनीहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सोसल मिडियामा राम्रो स्पोन्सर खोजेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ।
यि एफिलेट कम्पनीहरु सबैमा मैले काम चाहि गरेको छैन । तर केहि कम्पनीहरुमा मैले तालिमसम्म लिएको छु । जस्तो कि मैले (MOBE) भन्ने कम्पनीमा पैसा तिरेर तालिम नै लिएको छु । जसमा एफिलेट मार्केटिं भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मजाले जान्न सके । मार्केटिं गर्ने तरिका के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पाए । धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरु(Customers) इन्टरनेटमा कसरी फेला पार्ने भन्ने कुरा बुझ्न पाए । यो कम्पनीमा राम्रो आम्दानी गर्नको लागि झन्डै $2500(२ लाख ५० हजार भन्दा बढि) लगानी गरेर छिर्नुपर्ने रहेछ । म अगाडि बढ्न सकिन । त्यति धेरै लगानी गर्ने अवस्था भएन ।
एफिलेट कम्पनीहरुमा काम गर्नुभन्दा अघि उनीहरुको सर्भिषमा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई त्यो कम्पनीहरुमा काम गर्नको लागि एफिलेट लिन्क प्राप्त हुन्छ र हामीलाई मार्केटिं गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
एफिलेट मार्केटिंबाट कमाउनको लागि पहिलो खुड्किला भनेको मार्केटिं सिस्टम हो । तपाईले मार्केटिं गर्नको निम्ति २ वटा विकल्प हुन्छ । एउट फ्रि मार्केटिं अर्को पेड मार्केटिं । फ्रि मार्केभित्र यि तलका कुराहरु पर्दछन् ।
र पेड मार्केटिं भित्र यि तलका कुराहरु पर्दछन् ।
यि दुई मध्ये कुनै पनि तरिका रोजेर तपाई मार्केटिं गर्न सक्नुहुन्छ । फरक के त ? तपाईको मनमा यहि उब्जियो होला । जब तपाई कुनै एफिलेट मार्केटिं कम्पनीमा प्रोडक्ट किनेर एफिलेट लिन्क(Affiliate Link)लाई मार्केटीं गर्दा चाहिने मुख्य तरिका यि दुइ मार्केटिं नै हुन् । फ्रि मार्केटिं(Free Marketing)को उपयोगद्धारा काम गर्दा आम्दानी नहुने हैन तर निकै समय लाग्छ । यस मानेमा कि तपाई आफैले ग्राहकहरु खोज्ने, उनीहरुसँगको सम्बन्ध पिआर क्रेट गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो निकै लामो समयको झन्झटिलो चाहि हुन्छ ।
तर यता पेड मार्केटिं (Paid Marketing) भनेको तपाईले विज्ञापन दिएर मार्केटिं गर्ने सिष्टम हो । जसमा तपाइले थोरै बजेट छुट्याउन सक्नुहुनेछ । जस्तो तपाईको १०० डलरको बजेट छुट्याएर त्यो विज्ञापनको कारण १००० डलर को ब्यापार दिन्छ भने किन डराउनु हुन्छ पेड मार्केटिं गर्न ।
कसरी गर्छ त्यतिका विजनेनश ? अर्को कौतुहलता मनमा उब्जियो होला । यो पनि एउटा लम्बेतान कहानी छ । अर्को पोष्टमा म बताउने छु । तर छोटकरीमा यति चाहि भन्छु । तपाईको बिजनेश मार्केटिं गर्नको निम्ति अटोरेष्पोन्डर, क्याप्चर पेज, ल्यान्डिं पेजहरु तयार गर्ने थर्ड पार्टीहरु हुन्छन् । साथै उनीहरुले नै एउटा निश्चित बजेटमा निश्चित ब्यक्तिहरु खोजिदिन्छ र उनीहरुलाई फलो गर्ने कामहरु पनि गरिदिन्छ । त्यसबाट त्यसलाई एउटा अटो पाइलट सिस्टम नि भन्न सकिन्छ ।
अब कुरा गरौ Easy1UP को । यो प्रोगाम साच्चिकै यति राम्रो र भरपर्दो छ कि तपाईले सानो बजेटबाट काम सुरु गर्दा नि फाइदा नै छ । ठुलो बजेट बाट सुरु गरे पनि उत्तिकै फाइदा । कम्तीमा सानै बजेटबाट काम सुरु गर्दा पनि तपाईले कम्तिमा मासिक रु.१०,००० मासिक कमाउन सक्नुहुन्छ भने ठुलो बजेटबाट काम गर्दा तपाईले ३० हजार देखि १ लाख सम्म कम्तिमा कमाउन सक्नुहुन्छ ।
यसको विषयमा विशेष बुझ्नको लागि तपाई स्काइपमा भेट गर्न गर्न सक्नुहुनेछ ।
स्काइप : jrmarketing777@gmail.com
साथै Easy1UP प्रोगाममा काम गर्न चाहानुहुन्छ भने यो लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।
यसको मार्केटिं गर्ने तरिका यि माथि लेखिएका कुराहरु नै हुन् । ्केहि आम्दानीको प्रुफहरु यहाँ समेटिएको छ ।
$100 Commision Per day
Per day $100 our Leader Lewis Syring Earn
यो पोष्ट पढेर तपाईको मनमा उब्जिएका कुराहरु केहि छन् भने तल कमेन्ट दिन नविर्सनुहोला ।
Posted by Pokhara News at 10:07 AM
Subin Ghimire said...